Macalinka kooxda Arsenel oo si lama filaan ah ugu dhaqaaqi doono saxiixa mid kamid ciyaaryahanada Man United. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Macalinka kooxda Arsenel oo si lama filaan ah ugu dhaqaaqi doono saxiixa mid kamid ciyaaryahanada Man United.
Macalinka kooxda Arsenel oo si lama filaan ah ugu dhaqaaqi doono saxiixa mid kamid ciyaaryahanada Man United.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 19-06-16 11:28 AM Arsenal ayaa wado indha indheyn ku aadan sidii ay kula soo saxiixan laheyd daafaca kooxda Man United Daly Blind.
Daafacan u dhashay dalka Holland Daley Blind ayaanan hubin musataqbalkiisa ku aadan kooxda tan iyo markii xilka macalinimada kooxdaas loo dhiibay Jose Mourinho.
Blind oo United ugu fadhiya 16 Milyan oo Ginni ayaa noqday mid kamid fureyaasha muhiimka ah ee kooxda xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa uuna saftay inta ugu badan kulamada kooxda ka dhisan gegida Old Trafford, Balse Mirror ayaa tabineysa in ciyaaryahankan dhirirkiisu yahay 5ta Fiid uusan anfaceyn JOse Mourinho oo doonayo ciyaaryahan dheer.
Macalinka Arsenal Arsene Wenger ayaase doonayo inuu ka faa’iideysto tafaraaruqa ka jira gudaha kooxda shayaadiinta cas cas, waxa uuna doonayaa macalinkan reer France inuu ku xoojiyo shaxdiisa xilli ciyaareedka dambe, xilli ay ku fashilmeen hanashada horyaalka xilli ciyaareedkii tagay.
“Horey inaan ula sii jaan qaado kooxda ayaan doonayaa, waa inaan sugaa aana fiiriyaa go’aanka macalinka cusub ee kooxda, hadii uu la imaan doono is badal iyo hadii kaleba”. Blind ayaa sidaas usheegay NOS.
“waxaan sameyn doonaa dadaal intii karaamkeyga ah, waxaana rajeyayaa inaan lasii shaqeeyo macalinka guulaha ku caan baxay” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
“Ma ihi sida Pepe oo kale, balse xilli ciyaareedkii hore waan soo muujiyey inaan kasoo bixi karo doorkeyga ku aadan daafaca kooxda xilli ciyaareedkii tagay” ayuu hadalkiisa ku soo gunaanuday
Hadalkan kasoo yeeray caasimada dalka Ingiriiska ee London ayaanan aheyn mid weli si rasmi ah loo shaaciyey, Arsene Wenger qorshihiisa ku aadan daafacan reer Holland weli ma uusan soo bandhigin, balse wixii kusoo kordha waa idinla soo socod siin doonaa insha allaaah.